प्रचण्ड नभए देश चल्दैन, प्रचण्ड माओवादी केन्द्रका ‘राजा’ — Imandarmedia.com
प्रचण्ड नभए देश चल्दैन, प्रचण्ड माओवादी केन्द्रका ‘राजा’
काठमाडौ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणप्रसाद दाहालले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नभए देश नचल्ने ठोकुवा गरेका छन्। नेपाली रेडियो नेटवर्क एनआरएनको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि कुरा गर्दै नेता दाहालले भने,
अहिले राजनीतिको मियो नै प्रचण्ड हो। उहाँ दुई दिन बाहिर जानुभयो भने यहाँ सुनसान हुन्छ। प्रचण्ड नभए देश चल्दैन। प्रचण्डमा देश चलाउने भिजनमा केही कमी नभएको पनि उनले दाबी गरे।
उनले थपे, “प्रचण्ड ३५ वर्षको उमेरमा टीका लगाएर नेता भएका हुन् त ? भिजन नभईकन कोही नेता हुन्छ ? भिजन केलाई भन्ने ? उखान टुक्का कि जोकलाई ? केपी ओलीले नारायणघाटमा,
भीड जम्मा गरेर हल्लाखल्ला गरे। के विचारको बहस भयो ? बहसका नाममा केपी बा भन्ने कि नभन्ने मात्रै भयो। कम्युनिस्ट पार्टीको नेता बलपजफ्ती ठड्याएर नबन्ने पनि उनको भनाइ छ।
उनले भने, माओवादी कमजोर भयो भन्ने हुइयाँमात्र हो। त्यसको प्रमाण के छ ? यो देशमा नेता बन्न रहर त धेरैले गरे। तर प्रचण्डजस्तो नेता कोही पनि भएनन्। नेतृत्वको विकल्प आवश्यकताले खोजिने हो।
कम्युनिस्ट पार्टी ज्योतिषी हेरेर चलाउने होइन। पार्टीमा प्रचण्डका एकसे एक उत्तराधिकारीको पंक्ति तयार भएको पनि दाहालले बताए। उनले थपे, “केपीले के भने, त्यो मुख्य कुरा होइन।
विगतमा नेता बन्ने रहर त धेरैले गरे। कम्युनिस्ट पार्टीको नेता बलपजफ्ती ठड्याएर बन्ने होइन। हामी सबै प्रचण्डका उत्तराधिकारी हौं। हामीसँग एक सय एक उत्तराधिकारी छन्।
नेपाली काँग्रेसले १४ औं महाधिवेशनबाट भारी प्रतिस्पर्धा गर्दै निर्वाचनका माध्यमबाटआगामी नेतृत्व तयार भएको छ। नेकपा एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सहमतिमै जोड दिएपनि केही नेताको अडानले चुनावमार्फत नेतृत्वमा आए।
अब प्रश्न राष्ट्रिय सम्मेलनको सम्मुखमा रहेको माआवादी केन्द्रमाथि सोझिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ३० बर्षदेखि पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका छन्।
र ३० बर्षदेखि नै माओवादी टिके प्रथामै चलेको छ। २०४८ सालमा नेकपा एकता केन्द्रको महामन्त्री बनेका प्रचण्ड ५१ सालमा आएर माओवादी बनाएयता सधैँ अध्यक्षको भूमिका छन्।
पार्टीमा उनले जे चाहान्छन त्यहि हुन्छ। उनले गरेको एक्कल निर्णय सबैले मान्नु पर्छ। माओवादीलाई प्रचण्डले यस्तो बनाएका छन् कि, उनको इच्छाबेगर न पार्टीमा, न कुनै संगठनमा नेतृत्व चयन हुनसक्छ।
न उनले पार्टीभित्र आफ्नो विकल्प बारे कसैलाई सोच्न सकेका छन्, न कसैलाई नेतृत्वका लागि स्वीकार्न। बरु नेतृत्व तहमा पुग्ने अवस्था नदेखेपछि बाबुराम भट्टराई हुँदै रामबहादुर थापा बादल जस्ता नेताहरु बाहिरीएका छन्।
यही माओवादीले पुस ११ देखि १३ सम्म राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दैछ। र प्रश्न टड्गारो बनेर उभिएको छ, के यो सम्मेलनले प्रचण्डको विकल्प दिन सक्ला र नेताहरुले पार्टीको अध्यक्षमा प्रचण्डबाहेक अरुको विकल्प देखेका छैनन्।
नेतृत्व लिनेइच्छा भएपनि प्रचण्डकै स्थानमा उभिएर पार्टी चलाउने आँटका साथ कोही आउने सम्भावना पनि देखिएको छैन। बरु बाँचुञ्जेल प्रचण्डलाई नै नेतृत्वका रुपमा स्वीकार्ने र सधैँ दोस्रो बनेरै,
राजनीतिबाट अवकाश पाउनेपथमा उनीहरु छन्। यसरी दोस्रो बन्ने होडमा यतिबेला, जनार्दन शर्मा, बर्षमान पुन,पम्फा भूसाल र शक्तिबहादुर बस्नेत छन्। अध्यक्षपछिको शक्तिशाली पद,
महासचिवका लागि उनीहरु प्रचण्डसँग लविङ गर्न थालिसकेका छन्। पार्टीमा दोस्रो मानिएका नारायणकाजी श्रेष्ठले भने महासचिव पदमा दाबी गर्ने सम्भावना छैन। उनी सम्भव भए नेतृत्वमा दाबी गर्थे।
तर ताकत नपुगेपछि आफु निकट गिरिराजमणि पोखरेलले महासचिवमा पठाउने तयारीमा छन। हरिबोल गजुरेलको समेत महासचिवमै इच्छा देखिएका बेला महासचिव भएर काम गरिसकेका,
कृष्णबहादुर महरा पनि दोहोरिने तयारीमा छन्। अन्य धेरै आकंक्षीले मुखै खोलेर भन्न आँट गरेका छैनन्, बरु प्रचण्डको इशारा पर्खिएका छन्। फलतः नेतृत्वमा प्रचण्डको विकल्प, त देखिदैन।
नत अन्य पदमा पनि उनको चाहनाविपरितको व्यक्ति आउन सक्ने छैन। प्रचण्डले आफूसँग जुध्ने सबैको सिङ खुस्काएका छन र पार्टीका हरेक अन्तरसंघर्षमा जीत हात पारेका छन्।
सहयात्री पार्टी नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसले प्रतिस्पर्धाकै आधारमा नेतृत्व छान्दा, केन्द्रीय नेृतत्व चयनमा वर्षौदेखि जारी टिके प्रथा भत्काउन प्रचण्डमाथिसमेत दबाब परेको छ। आकांक्षीहरुको तीव्र हानथापकै बीच,
बागमती प्रदेश र प्रदेश एकमा प्रचण्डले निर्वाचनबाट नेतृत्व छान्न स्वीकृति दिएका छन्। अब केन्द्रीय नेतृत्वमा समेत प्रचण्डले टिका लगाएर पद बड्लान वा प्रतिस्पर्धाका लागि तयार होलान्, चासोका साथ हेरिएको छ।